🥇 ukubalwa kwemali kubarhwebi bamatyala
Inqanaba: 4.9. Inani lemibutho: 965
Ividiyo ye-accounting kubarhwebi bamatyala
Uku-odola i-accounting kubarhwebi bamatyala
Imibutho yamatyala ibonelela ngeenkonzo ezahlukeneyo ezinxulumene nokuthengiselana. Basebenza kwiinkonzo ezithe ngqo nezingumlamli. Ngoncedo lwesoftware yale mihla, unokuseta nayiphi na imisebenzi yeshishini. Abarhwebi ngetyala banikwa ingxelo ngokwemigaqo ethile, echazwe kwimigaqo yamaqumrhu karhulumente, nakumaxwebhu angaphakathi enkampani.
Isoftware ye-USU inceda ukugcina iirekhodi zabathengi babathengi bekhredithi kunye nokwenza ingxelo ngokuqhubekayo ngokulandelelana. Akukho msebenzi uya kuphoswa. Zonke izikhombisi zabathengi zirekhodwa kwisitatimende esinye esidityanisiweyo. Ke, isiseko esiqhelekileyo siyenziwa. Abarhwebi ngetyala badlala indima ebalulekileyo kunxibelelwano phakathi komboleki kunye nefemu. Bayanceda ukwenza imisebenzi xa kungekho xesha lasimahla okanye ukungabikho kolwazi kwishishini.
Ngokusebenza kwe-accounting, unokulandela umkhondo womsebenzi weSebe ngalinye kunye nomqeshwa. Abantu abanoxanduva lokuchongwa bachongwa ngenxa yencwadi. Ubunkokeli bombutho, kunyanzelekile ukuba ufumane ulwazi oluchanekileyo noluthembekileyo ngaphambi kokwenza umgaqo-nkqubo wokukhuthaza kunye nophuhliso. Ukuthotyelwa kwemigaqo yemiyalelo yangaphakathi kunika eso siqinisekiso.
Umthengisi wekhredithi ngumntu okhethekileyo okwaziyo ukwenza izigqibo ezizimeleyo egameni lomthengi. Okokuqala, kwenziwa isivumelwano, esichaza imiba yokunxibelelana nabantu besithathu. Ngenxa yokuphuhliswa kwetekhnoloji yolwazi, inkampani inokuwuphucula umsebenzi wayo ngeendlela ezininzi. Ukunciphisa iindleko zexesha kunye nokwandisa ukufumaneka kwezixhobo zemveliso kunceda ukwandisa imveliso. Ukudalwa kweemeko ezifanelekileyo zokusebenza zabasebenzi kuchaphazela umdla wabo kukuhamba kwabathengi.
Isoftware ye-USU yenzelwe ukwenza imisebenzi yeshishini kumacandelo ahlukeneyo oqoqosho kunye nokuqinisekisa ukubalwa kwayo. Ubume bayo buqulathe iintlobo ngeentlobo zeencwadi kunye nezinto zokuhlelwa onokuzichazela zona. Iiparameter eziphambili zinceda ukuseta uvavanyo kunye nokuphunyezwa ngokwamanqaku okufakwa. Ukusebenza okuphezulu kuqinisekisa ukwenziwa kwecingo ngokukhawuleza. Ingxelo nganye ibonelela ngohlalutyo oluphambili lwetotali zabathengi, iarhente, iiasethi ezinzileyo kunye nokunye.
Iakhawunti yabarhwebi ngetyala kwinkqubo ekhethekileyo inegalelo kulawulo olupheleleyo lwazo zonke iinkqubo zemveliso. Ke, unokulandela umkhondo womthwalo wabasebenzi kunye nenqanaba lemveliso. Ekupheleni kokutshintsha, itotali iyashwankathelwa, kwaye idatha idluliselwe kwiphepha lesishwankathelo. Iipredishithi zenziwe ngemigca emininzi kunye neekholamu ezigcwele idatha ebonelelweyo. Ngeetemplate ezakhelweyo, unokwenza ngokuzenzekelayo ikhontrakthi kunye nezinye iifom zobalo.
Isoftware ye-USU ngumncedisi olungileyo kumphathi. Iyakwazi ukubonelela ngokukhawuleza kuwo onke amacandelo, ivelise iingxelo kunye neerhafu, ilandelele amanyathelo abasebenzi, ichonge inqanaba lentlawulo kunye nokuhlawulwa kwamatyala, ukujonga ukubonelelwa kunye nemfuno, kunye nokunceda ekwenzeni ukusebenza kweshishini.
Kwiminyaka yeDatha eNkulu, kukho ukuhamba kwedatha okukhulu, ekufuneka kuhlalutywe ngokufanelekileyo kwaye kuthathelwe ingqalelo ngexesha leenkqubo ezenziwa ngumthengisi wekhredithi. Ke ngoko, kubalulekile ukuba uququzelele umsebenzi weenkampani zeentengo zemboleko ngokweemfuno zabaxumi, ukubatsala kunye nokwandisa inqanaba labo lokunyaniseka. Esona sisombululo sisoftware yale mihla - inkqubo yekhompyuter yokuzenzekelayo, ekwaziyo ukwandisa umsebenzi walo lonke ishishini lokuthenga ngetyala, ivumela abathengisi ukuba benze ngaphandle kwempazamo enye. Ukuyiqinisekisa, inkqubo ekumgangatho ophezulu yokubala iyafuneka, eya kuthi iququzelele yonke inkqubo, inyuse ukusebenza ngokukuko kwenkampani. Isoftware ye-USU ibonelela ngala mathuba okuxhasa umsebenzi wabarhwebi ngetyala. Elinye lala maziko kukwenziwa kwamaxwebhu kunye nokubalwa kwemali, kubandakanya iifom kunye nezivumelwano, ukude, kwi-Intanethi ngoncedo lonxibelelwano lwe-Intanethi.
Kuwo onke amashishini, eyona nto ibalulekileyo kukunika ingxelo, ngakumbi kwiinkampani zeentengo zemboleko, njengoko umsebenzi wayo unxulumene ngqo nokuthengiselana kwemali kunye nempazamo encinci enokubangela ilahleko enkulu yemali. Ke ngoko, inkqubo yobalo-mali kunye nengxelo kufuneka ikwinqanaba eliphezulu, inike iingxelo ezingenazimpazamo, ekufuneka zisetyenziselwe ukuqikelela kunye nokucwangciswa kwesikhokelo sophuhliso lwexesha elizayo kubathengisi bamatyala. Ngoncedo lwenkqubo yobalo kubathengi bekhredithi, oku akuyi kuba ngumcimbi njengoko zonke ezi nkqubo zenziwa kwinkqubo yekhompyuter, ngaphandle kongenelelo lomntu.
Zininzi ezinye izibonelelo zenkqubo ezinje ngokungena ngokungena kunye negama eligqithisiweyo, ujongano olululo, imenyu entle, utshintsho nangaliphi na ixesha, isiseko sedatha ye-elektroniki, ukudala okungenamda kwamaqela ezinto, ukuchongwa kweentlawulo ezifike kade, ubalo olwenziweyo kunye nohlalutyo, umvuzo kunye nolawulo lwabasebenzi ukubalwa kwenqanaba lenzala, ukudalwa kwezicwangciso kunye neeshedyuli, uqeqesho lwemali, ukulayishwa nokukothula isitetimenti sebhanki, izatifikethi zobalo, iifom zokunika ingxelo engqongqo, ii-waybhile, ukuthumela imiyalezo ngeSMS okanye nge-imeyile, ukufumana izicelo nge-Intanethi, iingxelo ezizodwa, iincwadi, iimagazini, uhlalutyo lwengeniso nenkcitho, ukumiselwa konikezelo kunye nemfuno, ukulandelwa kokusebenza kwabasebenzi, iiakhawunti ezifumanekayo nezihlawulekayo, ukusetyenziswa kulo naliphi na icandelo lezoqoqosho, uvavanyo lwenqanaba leenkonzo, ingxelo, umncedisi owakhelwe ngaphakathi, ii-invoyisi, ukwenza izinto ngendlela eyahlukileyo, inkqubo yokuzenzekelayo, uhlalutyo oluphambili , Ukwanda kwemveliso yezixhobo zemveliso, umanyano lwabathengi, inkonzo yokujonga ividiyo, ukumisela imeko yezemali Ion kunye nemeko yezemali, iingxelo zoxolelwaniso namaqabane, ikhalityhuleyitha eyakhelwe-ngaphakathi yemali mboleko, ikhalenda yemveliso, ukubala okuxabisa, unxibelelwano ngeViber, ukwenza ikopi yogcino, ukuhambisa isiseko sedatha kwenye inkqubo, ulawulo lwamasebe, kunye nokusebenzisana kweenkonzo namasebe.